Doorashada Soomaaliya ee 2020: Damaca Imaaraatka Carabta iyo Sucuudigu ma suurta gali doonaa? – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDoorashada Soomaaliya ee 2020: Damaca Imaaraatka Carabta iyo Sucuudigu ma suurta gali doonaa?
Doorashada Soomaaliya ee 2020: Damaca Imaaraatka Carabta iyo Sucuudigu ma suurta gali doonaa?
13/07/2018 Wararka Soomaalia 0
Isku daygii fashilinta xisbiga wadaniga/islaamiga ah ee xisbu nahdaha Tunis, taageeradii Xariiri, iskudaygii fashilinta Erdogan iyo Mahater kadib imaaraatka iyo Sucuudigu waxaa diiradda usaaran doorashada Soomaaliya ee 2020-ka.
Dalalka Malaysia, Lubnaan, Turkiga, iyo Tunis doorooshooyinkii ugu danbeeyay ee ka dhacay waxaa jiray faragalin ay malaayiin doolar Ku baxday oo ay wadeen Imaaraatka iyo Sucuudiga, inkastoo uu fashilmay isku daygooda. hadana wuxuu ahaa iskudayo khatartooda leh oo ayba qaarkood Ku dhawaadeen in ay suurta galaan.
Sida qorshuhu yahay doorashada 2020-ka ee soo socota, Imaaraatka iyo Sucuudigu waxay damacsanyihiin abuurista xisbi ay Ku midaysanyihiin madaxda maamul goboleedyada, xisbiyada daljir&amp;damuljadiid, iyo siyaasiyiinta taageersan aragtidooda, ayadoo lagu maalgalinayo dhaqaale xaddhaaf ah.
Inksatoo Imaaraatka iyo Sucuudigu damacoodu uu aad khattar uyahay hadana wada shaqaynta MD farmaajo iyo RW kheyre iyo taageerada ay shacabka ka haystaan markii la isku daro waxay uegtahay in uu fashilmi doono damaca Imaaraatka iyo xulufadooda Sucuudiga. sida ay ugu fashilmeen doorashooyinkii Lubnaan, Tuunis, Turkiga iyo Malaysia.
Dardargalinta iyo dajinta istiraatiijiyada uu Ku fuli lahaa mashruucaas ayaa baryahaanba si xawli ah uga Socday magaalada Nairobi ayyadoo halkaas ay isugu tageen Siyaasiyiin farabadan oo kakala socda garabyo siyaadeed ookala duwan.
W/Q: Sacad Cabduqadir Awmagan.
DHAGEYSO:-Dadka ku nool Xaafada Suuqa Xolaha oo ka cabanaya Ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya